किन ओझेलमा सरिता NewsButwaltoday
कृष्ण खनाल बुटवल, १२ भदौ ।
लोक दोहोरी, आधुनिक, चलचित्र, गजल लगायतका विधामा उनको स्वर छ । पहिलो पटक पुरस्कारको रुपमा कापि जितेको दिनले उनलाई संगीत क्षेत्रमा लाग्ने महŒवपूर्ण प्रेरणा प्रदान ग¥यो । जसले हालसम्म पनि गीत संगीतको क्षेत्रमा उनलाई डो¥याई रहेको छ ।
बुटवलको बागेश्वरी संगीतालयमा प्रशिक्षकको रुपमा समेत रहेकी उनले हाल काठमाडौंमा संगीत सिक्दैछन् ।
रुपन्देहीमा जन्मिएर कलाकारिता क्षेत्रमा आफ्नो उचाई बनाएकी सुनार त्यै पनि ओझेलको पात्रको रुपमा रहेकी छिन् । वि.सं. २०६१ सालमा एसएलसी दिएर संगीत सिक्नको लागि बुटवल आएकी उनी करिब ३ बर्षसम्म बागेश्वरी संगीतालयमै संगीत सिकिन् । त्यसपश्चत उनलाई निरन्तरता दिन आर्थिक अभाव भयो । उनी भन्छिन्–‘महिनाको ८ सय रुपैयाँ पनि तिर्न नसक्ने अवस्था आयो त, त्यतिबेला छोडीदिए ।’ पछि पुनः बागेश्वरीका सञ्चालक÷प्रबन्धक सुरेश सेन्चुरीले उनलाई त्यहि नै प्रशिक्षक को रुपमा काम दिए । आफू पनि सिक्दै अन्य प्रशिक्षार्थीहरुलाई पनि सिकाउँदै उनी अगाडि बढिन् । हार्मोनिममा पोख्त उनी संगीतालयमा हार्मोनियम र भोकल (गायन) सिकाउँदै आएकी थिइन् । करिब ९ बर्षसम्म उनले संगीतालयमा नै बिताइन् । हालसम्म उनले करिब २ सय भन्दा बढि विद्यार्थीहरुलाई संगीत, गायनको कला सिकाइसकेकी छिन् ।
संगीतमा भारतमा रहेको ईलावादबाट डिप्लोमा कोर्ष पुरा गरेकी उनले आफ्नो २ वटा एल्बम बजारमा ल्याएकी छिन् । वि.सं. २०६६ सालमा कलेक्सन एल्बमको रुपमा साथीहरु संग मिलेर ‘मेरो हजुरलाई’ बजारमा आएको थियो । ८ वटा गीत समावेस गरिएको उक्त एल्बममा दुई वटा गीत सरिताले नै गाएकी थिइन् । नजरै बोलाएँथे, ओत देऊ हो मलाई... बोलको गीत उनको आफ्नो थियो ।
यस्तै उनले ‘मेरो मन...’ एल्बम २०७० सालमा बजारमा ल्याइन् । जसमा मेरो मन... शीर्ष गीत उनको थियो । उनले पहिलो पटक लोकदोहोरी गीत योगराज पाखेरेलको वि.सं. २०६२ सालमा वारी फूलबारी पारी फूलबारी बोलको गीत गाएकी थिइन् । यस्तै चलचित्रमा पनि उनको स्वर रहेको छ । चलचित्र ‘दिल’, ‘रिक्सावाला न्यायदाता’ मा पनि उनले स्वर दिएकी छिन् । यस्तै चर्चित गायक राजेशपायल राई संग उनले चलचित्र ‘सन्देश’ र ‘भुल भए माफ गर’ मा पनि गीत गाएकी छिन् । उनी भन्छन्–‘सानै देखि म्युजिकमा बढि झुकाव थियो, त्यहि भएर यो नसा छोड्न सकिनँ, लागिरहेकी छु, संघर्ष गरिरहेकी छु । ’
सुरुका बर्षहरुमा बुटवल र यस आसपासमा हुने कुनै पनि म्युजिक स्टेज कार्यक्रममा नछुट्ने उनी पछिल्लो समयमा केही कमी भएको बताउँछन् । उनी भन्छिन्–‘काठमाडौंमा गएपछि यहाँको स्टेज कार्यक्रम कम भएको छ ।’ काठमाडांैमा रहेको प्रकाश गुरुङ्गको साधना कला केन्द्रमा रियाज, संगीत सिक्दै गरेकी उनले हालै तीजको गीत समेत बजारमा ल्याएकी छिन् । लोक गायक मन बहादुर सतशंकरको ‘रातो साडी...’ बोलको गीतमा उनले स्वर दिएकी छिन् । वि.सं. २०६१ सालमा नेपाली तारामा समेत भाग लिएकी उनी उत्कृष्ट ४० बाट बाहिरिएकी थिइन् । उनी भन्छिन–‘संघर्षमा नै लागेकी छु, अझै लाग्ने छ ु ।’ à
अपडेट : 2018-08-29 12:54:52